SketchUp Pro 2018 v18.0.16975 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home 3D Design Software Computer software Design SketchUp Pro 2018 v18.0.16975
Maung Pauk at 12:05:00 PM 3D Design Software, Computer software, Design,
SketchUp ဟာ အင်ဂျင်နီယာတွေအသုံးများတဲ့ Design ပိုင်းဆိုင်ရာ Software ဖြစ်ပါတယ်.. အိုးအိမ်တိုက်တာ အဆောက်အဦ ဒီဇိုင်းတွေကို 3D ပုံရိပ်တွေနဲ့ တိတိကျကျ ရေးဆွဲပေးနိုင်ပါတယ်... ပုံကြမ်းတွေ၊ မြေပုံတွေကိုလည်း စနစ်တကျ ရေးဆွဲပေးနိုင်ပြီး မြေပုံတွေကို Google Map နဲ့ ချိတ်ဆက်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်..
Full Version ရဖို့ Patch လုပ်နည်းကတော့
Setup နဲ့ Install လုပ်ပြီး မ Run ပါနဲ့..ပိတ်ပစ်ပါ..
Patch ကို Run ပြီး Patch ပေးလိုက်ပါ..
SketchUp ဟာ အငျဂငျြနီယာတှအေသုံးမြားတဲ့ Design ပိုငျးဆိုငျရာ Software ဖွဈပါတယျ.. အိုးအိမျတိုကျတာ အဆောကျအဦ ဒီဇိုငျးတှကေို 3D ပုံရိပျတှနေဲ့ တိတိကကြ ရေးဆှဲပေးနိုငျပါတယျ... ပုံကွမျးတှေ၊ မွပေုံတှကေိုလညျး စနဈတကြ ရေးဆှဲပေးနိုငျပွီး မွပေုံတှကေို Google Map နဲ့ ခြိတျဆကျပို့ပေးနိုငျပါတယျ..
Full Version ရဖို့ Patch လုပျနညျးကတော့
Setup နဲ့ Install လုပျပွီး မ Run ပါနဲ့..ပိတျပဈပါ..
Patch ကို Run ပွီး Patch ပေးလိုကျပါ..
SketchUp isa3D modeling program optimized forabroad range of applications such as architectural, civil, mechanical, film as well as video game design. It willl help you learn to create 3D models of houses, sheds, decks, home additions, woodworking projects – even space ships.<
You can add details, textures and glass to your models, design with dimensional accuracy, and place your finished models in Google Earth. Also you can share them with others by posting them to the 3D Warehouse, or print hard copies.<
SketchUp allows you
Home Page : https://www.sketchup.com/products/sketchup-pro/new-in-2018
Download SketchUp Pro 2018 v18.0.16975.rar : 163.29 MB